जाडोमा के खाने ? - टिप्स - प्रकाशितः माघ १०, २०७४ - नारी
जाडोमा के खाने ?
- भारती अधिकारी झा, फुड टेक्नोलोजिस्ट
* जाडो मौसममा बढी पानी पिउने हो भने चिसो लाग्छ भन्ने सोच धेरैमा हुनसक्छ तर जाडोमै अझ बढी पानी पिउनुपर्छ ।
* छाला सुख्खा हुने हुनाले जाडोमा शरीरलाई प्रशस्त मिनरल्सको आवश्यकता पर्छ । यतिबेला दैनिक कम्तीमा पनि ६ देखि ८ गिलास पानी पिउनुपर्छ ।
* चिसो मौसममा फलफूल खाँदा सर्दीले समात्ने, रुघा–खोकी लाग्ने समस्या निम्तिने कुरा सही होइन । जाडोमा हरिया सागपात, अनार, आलु, जुनार, कागती, सुन्तला आदि सिट्रसयुक्त फलफूलको प्रयोग प्रशस्त मात्रामा गर्नुपर्छ ।
* अदुवा, लसुन, प्याज आदि मिसाइएको खाना खानु फाइदाजनक हुन्छ ।
* सुप, जुस, ज्वानो–मेथी प्रयोग गरिएका झोलयुक्त पदार्थ यो मौसमका उत्तम खानेकुरा हुन् ।
* भिटामिन डी छुटाउन नहुने कुरा हो । बिहान ८ बजेअघिको घाममा बस्दा, सालमोन, म्याकरेल, सार्डिन्स आदि ओइली फिस तथा दूध–दहीबाट पनि भिटामिन डी प्राप्त गर्न सकिन्छ जसले शरीरको इम्युनिटी पावर बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।
* निस्क्रिय रहनु हुँदैन । शरीरलाई चलायमान राख्नुपर्छ । लिफ्टको साटो भर्‍याङ प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथीभाइसँग च्याट वा इमेलमा भन्दा पनि भेटेरै कुराकानी गर्नु शरीर एवं मस्तिष्क दुवै दृष्टिले फाइदाजनक हुन्छ ।
पुस २४, २०७५ - जाडोमा उपयोगी खानेकुरा
गर्मीमा कस्तो पहिरन लगाउने ? वैशाख ५, २०७६
केशको स्याहार वैशाख २, २०७६